Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kulamo kawada Gobalka Bakool – Kalfadhi
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kulamo kawada degmada Xudur ee xarunta gobalka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliy.
Mursal iyo wafdigiisa ayaa la kulmay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka gobalka Bakool, xalay iyo shalay gelinkii dambe waxaana laga wada hadlay dhibaatooyinka ka jira degmooyinka Bakool.
Waxyaabaha ay dhinacyada isku hadal qaadeen waxaa kamid ah go’doonka muddo 7 sano ah saaran degmooyinka gobalka iyo xaaladda adag oo ka jirta gobalkaasi, sida uu noo sheegay mid kamid ah waxgaradkii la kulmay Mursal.
Malaaq Xasan Cumar, oo ka tirsan odayaasha dhaqanka gobalka Bakool ee la kulmay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa Kalfadhi u sheegay in Guddoomiyaha ay kala hadleen xaaladda gobalka ka jirta.
“Guddoomiyaha waxaan kala hadalnay dhibaatooyin ku raagay dadka Bakool iyo sida ay tahay looga bixi karo, waxa uuna noo ballan qaaday in wax laga qaban doono dhibaatada heysato dadkaan” ayuu yiri Malaaq Xasan Cumar oo ka tirsan odayaasha Bakool.
“Muddo 7 sano ka badan ayey dadkaan u go’doonsanyihiin Al-shabaab Guddoomiye Mursal, waa ka war-haayaa madaxda dhanna waa ogyihiin ee waxay u baahantahay wax ka qabasho” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Malaaq Xasan Cumar oo ka tirsan odayaasha la kulmay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa shalay sheegay in magaalada Xudur ay yimaadeen sidii loo dar dargelin lahaa howlgalo ka dhan ah Al-shabaab oo lagu wado in ay ka bilaawdaan degmooyinka gobalka Bakool.
Dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa muddo ka badan 7 sano go’doon geliyay dhowr degmo oo ka tirsan gobalka Bakool ee Koonfurta Soomaaliya. Waxaa jirtay ballan qaadyo badan oo loo sameeyay dadka degaanka balse aan wali dhaqan gelin fulinta balamahaasi.